Mashiinka Mindhida, oo ah mashruuc lagu horumarinayo aadanaha, burka galleyda ayaa dadka korisa waxna u tartaa. Mashiinka Burka Galleyda ayaa si deg deg ah ugu horumaraya wadamada horumaray beeraha, waxaan soo saareynaa mashiinka wax shiida galleyda mudo ku dhow 10 sano laga soo bilaabo sanadkii 2008. Bulshadu hada waa hi ...
Mashiinka si wanaagsan loo soo saaray ee mashiinada wax lagu karsado ayaa isbadal ku keenay dhirta shiida burka, suuqa burka ee Shiinaha. Warshadda weyn ee shiidaa burku waxay umuuqataa inay qaadatay qayb weyn, mana ahan wax fudud wax soo saar badan awgood, waxay leeyihiin wax badan oo dhib badan ...
Mashiinka duubista casriga ah ayaa si gaar ah, oo aad u hufan, loogu talagalay in laga soo saaro bur badan oo cad intii suurtagal ah hadhuudh kasta
Cunista dhaqameed waa habka kaliya ee lagu hubiyo hufnaanta, tayada, dhadhanka iyo qiimaha nafaqada ee bur. Tani waa sababta oo ah hadhuudhka oo dhan waxaa lagu dhex mariyaa hal marin oo u dhexeeya laba dhagax, oo wareegsan, wareegsan, haynta iyo isku-darka saliidda jeermiga ee sarreenka ah. Nidaamkan fudud wuxuu marayaa heerkii ugu ...
marwalba waxaan qabnaa xamaasad iyo rabitaan inaan kaa caawino inaad bilowdo meheraddaada qodista daqiiqda adoo leh milkiile galley ama qashin qamadi
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah hay'adaha dhaqaalaha ee sida xowliga ah u koraya, Afrika waxay ka ciyaareysaa door aad iyo aad muhiim ugu ah adduunka. Sida dalal kale, beeraha aasaas ahaan muhiim ayey u yihiin qaranka, ma jiraan wax ka reeban Afrika, sidoo kale, beeraha ayaa muhiimad weyn ka leh dalal badan oo Afrikaan ah. Hase yeeshe ...
Mililayda galleyda iyo kuwa qamadiga wax lagu qoro shaki kuma jiro inay yihiin mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee nolol wanaagsan loogu noolaan karo waxna loogu kordhin karo dadka reer Kenya
In kasta oo wax soo saarka beeraha uu kooban yahay, haddana tirada dadka Kenya ayaa sii kordheysa. Tani waxay caqabad adag ku tahay cunno siinta dalka, dad badan ayaa helaya gargaar cunto sanadkiiba. Ku biirinta wershadaha cunnada kaliya maahan hab lagu beddelo nolosha shaqsiyeed laakiin waa ficil anshaxeed lagu xakameynayo ...
Mabaadi'da Shaqada ee Mashiinka Milling Mashiinka
Mashiinka Mashiinka Mashiinka wareega ee shaashadda wareejintu wuxuu adeegsadaa kala shaandhaynta hadhuudhka, mashiinka oo si isku mid ah loo soo saaraa seddex waddo, dhamaadka quudintu waa elliptik, qaybta dhexe waa wareegsan tahay ka dibna iyada oo loo marayo kala-guur yar oo oval ah si loo soo afjaro dhamaadka, qiyaasta isu-celinta toosan ee qiyaasta ah. Waxay leedahay uniq ...
Falanqaynta miraha ayaa ah habka looga saarayo nijaasta, hagaajinta qoyaanka, xoqida, xoqida iyo ku shiida alaabta ceeriin ee hadhuudhka ama badeecada budada iyadoo la raacayo heerar kala duwan oo tayo leh. Badar la sifeeyay, sida bur bariis, bur qamadi, bur galley iyo ...